Fanavaozana taratasim-pokontany :: Ho tonga tsikelikely eny amin’ny boriborintany ireo karine vaovao • AoRaha
Fanavaozana taratasim-pokontany Ho tonga tsikelikely eny amin’ny boriborintany ireo karine vaovao
Hanomboka amin’ity herinandro ity ny fandefasana an’ ireo karinem-pokontany vaovao sy maoderina, eto amin’ny kaominina Antananarivo renivohitra. Ho tonga miandalana eny amin’ireo boriborintany enina ireo taratasy ireo, araka ny loharanom-baovao. Nambaran’ny ben’ny tanàna, Naina Andriantsitohaina, afak’omaly alina, nandritra ny tafatafa nataony tamin’ny mpanao gazety, tetsy amin’ny Studio an’ny RTA tetsy Ankorondrano fa “hanomboka amin’ny firaiketana amin’ ny alalan’ny solosaina ny mombamomba an’ireo olom-pirenena hisitraka ny karine vaovao ny dingana voalohany”.
Handalo dingana maro vao ho tonga ny fitsinjarana azy isan-tokantrano. “Manaraka an’ireo toromarika fotsiny ihany izahay fa ny minisiteran’ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana no tena hisahana ny asa hafa rehetra”, hoy ihany ny ben’ny tanàna. Efa voatonta amin’ilay endriny nasehon’ny Filohan’ny Repoblika, Andry Rajoelina tamin’ny fahitalavitra ireto karinem-pokontany ireto, izay ahitana famantarana manokana hahafahana mandahatra ara-tarehimarika ny laharana omena isaky ny loham-pianakaviana. Tsy ho vita hosoka mihitsy ihany koa.
“Tsara dia tsara ny endriny fa ho hitanareo amin’ny fotoana manaraka ny mombamomba azy sy ny fomba hahafahana mitsinjara ny karine”, hoy kosa ny hany valin-teny azo avy tamin’ ny minisitry ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, Tianarivelo Razafimahefa, tamin’ny antso an-tariby, omaly. “Miandry toromarika avy amin’ireo manampahefana izahay”, hoy kosa ny ankamaroan’ireo lehiben’ny distrika eto amin’ny kaominina Antananarivo renivohitra.
Efa nambaran’ny Filohampirenena, tamin’ny volana jolay 2020 lasa teo, fa « tanjona amin’ izao fanavaozana ny karinempokontany izao ny fisorohana ny fanaovana hosoka mety hitarika kolikoly sy ny famantarana ny maha-ara-dalàna ny fanamarinam-ponenan’ireo olompirenena tsirairay eto amintsika ». Ho lasa karazana karapanondrom-pianakaviana kely mihitsy izany, araka ny fanamarihany.
Fampidirana mpianatra :: Mihantona ny fisoratana anarana amin’ny sekoly sasany
Baolina kitra- Fifaninanam-pirenena :: Miandry vola ny fanohizana ny fiadiana ny amboaran’i Madagasikara